Daty fikarohana GMO - Fikarohana GMO
Mandehana mankany amin'ny lohapejy havanana
Hiverina any amin'ny site footer
Search avy Keyword
Fikarohana farany ho an'ny tatitra hafa
Mikaroha tatitra hafa
Tohano ny fikarohana GMO
Ahoana no fikarohana?
Jereo ny siansa momba ny GMO sy ny famonoana bibikely mifandraika amin'izany ary ny fiantraikany amin'ny fahasalamana, fambolena ary ny tontolo iainana
Ny tobim-pahalalana GMO Research dia misy fandalinana sy famoahana diary izay manadihady ny risika na ny mety sy ny vokatra manimba avy amin'ny GMO ("novaina", "injenieran'ny genetika", na "zavamiaina biolojika") ary ireo fanafody famonoana bibikely sy fiompiana mifandraika amin'izany. Natao ho loharanom-pahalalana sy fikarohana ho an'ny mpahay siansa, mpikaroka, mpitsabo matihanina, mpanabe ary ny besinimaro ny tahiry. Fanadihadiana lalina momba ny fanadihadiana lehibe sasany no homena. Ny voalohany dia mety ho hita Eto.
Mitadiava diary, lahatsoratra, toko momba ny boky ary atiny fidirana misokatra.
Mikaroha tatitra hafa, toy ny tatitry ny ONG sy ny boky, izay tsy mahafeno ny mason-tsivana ho an'ny tahiry lehibe fa mitovy lanja sy misy ifandraisany.
Raha hitady ny angon-drakitra anay dia ampidiro ao amin'ny iray amin'ireo bara fikarohana etsy ambony ny zotram-pikarohanao na kitiho ny Search avy Keyword. Azafady mba jereo ny Ahoana no fikarohana? pejy raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fikarohana ireo data-data.
Angano sy fahamarinana GMO
Fiovana ara-morolojika sy biokimika amin'ny voalavo lahy nomena ny katsaka novaina (Ajeeb YG)
Tsy fahombiazana amin'ny famoahana
Famoronana zava-misy: Bt Cotton Fitantarana any India.
Ny tsindrin-tsakafo oksizenina amin'ny glyphosate, AMPA ary ny metabolites amin'ny pyrethroids sy ny chlorpyrifos pesticides eo amin'ny ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga fototra ao Chypre.
Porofon'ny fitsanganan'ny chlordecone amin'ny glyphosate any Frantsa Andrefana.
Ny fiantraikan'ny fihinanana sakafo amin'ny pesticides amin'ny metabolisma microbiome fecal amin'ny kambana lehibe.
Ny voka-dratsin'ny Glyphosate amin'ny rafi-pitatitra: Famerenana rafitra
Transgene Flow: Fanamby amin'ny Fiarovana amin'ny Fiarovana ny Katsaka any amin'ny Faritra Semi-Arid Breziliana.
Ireo mari-pamantarana biochemika amin'ny toetry ny atiny amin'ny serum-ran'ny voalavo mihinana soja sy herbicide "Roundup" tsy mahatohitra ny glyphosate.
Ny fiantraikan'ny soja novaina ara-pananahana glyphosate sy herbicide roundup amin'ny haavon'ny metabolite sasany amin'ny fifanakalozana azota amin'ny voalavo.
Ny fampandrosoana postnatal ny taranaky ny voalavo vavy sy ny massometric famantarana ny taovan'ny voalavo taranaka roa miaraka amin'ny fampiasana ny fototarazo novaina soja sy Roundup.
Metabolisme ny fitambarana azota amin'ny voalavo taranaka telo eo ambany fitarihan'ny soja novaina ara-pananahana glyphosate sy herbicide Roundup.
Tatitra farany an'ny ONG
Ny marimaritra iraisana amin'ny sakafo GM dia tokony hiorina amin'ny famerenana rafitra
Ny ankamaroan'ny fanadihadiana dia manondro ny sakafo GM malaza fa tsy azo antoka toy ny mahazatra
Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana sy ny mpianatra momba ny fahasalamana dia mino fa tsy azo antoka ny sakafo GM
Ny ankamaroan'ny vondrona ara-pahasalamana dia manontany ny fiarovana ny sakafo GM
Fifanarahana be loatra momba ny fiarovana ara-tsakafo novaina
Ity database ity dia ampiasain'ny GMO Free USA, 501 (c) fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana 3, miaraka amin'ny fanampiana avy amin'i GMOS Science ary GMWatch. Na dia tsy misy sarany aza ny fampiasana an'ity tahiry ity, fanomezana dia ankasitrahana manampy amin'ny fanefana ny vidin'ny fikolokoloana sy fanavaozana mitohy. Ny fanomezana dia azo esorina araky ny lalàna alain'ny lalàna.
Copyright © 2022 · Fikarohana GMO · Zo rehetra voatokana
Aza mivarotra ny mombamomba ahy manokana .